Echiche iji nnukwu piano chọọ ụlọ gị mma. Bezzia
Maria onyekwere | 11/10/2021 20:00 | Ngwongwo
Ị na -akpọ piano? Ọ nwere onye nọ n'ụlọ na -amụta ịkpọ egwu a? Ọ bụrụ otu a, ikekwe ị nwere mgbidi piano n'ụlọ. Ha bụ ndị kacha ewu ewu na enwere ihe abụọ gbara ọkpụrụkpụ kpatara nke a: ha na -ewere obere oghere ma dị ọnụ ala karịa nnukwu piano.
Nnukwu pianos mara mma nke ukwuu mana ha chọrọ inwe oghere dị mkpa ịnabata ha n'ụlọ. Ọ bụrụ na nke ahụ abụghịrị gị nsogbu, taa anyị na -enye gị ụfọdụ echiche iji nnukwu piano chọọ ụlọ gị mma ma jiri ya mee ihe, na -ekwu okwu ịchọ mma.
2 Ebe kacha mma
2.1 N'akụkụ windo n'ime ime ụlọ
2.2 Na -esote steepụ
2.3 Na oghere nkeonwe
Nwa pianos ojii ha bụ ndị kacha ewu ewu. Ha bụ ndị anyị na -ahụkarị n'ụlọ na ndị na -arụ ọrụ dị ka ngwa egwu na egwu egwu. Ha mara ezigbo mma, enweghị mgbagha. Otú ọ dị, ọ bụghị nanị ha bụ ndị ọzọ; Ị nwekwara ike ịkụ nzọ na nnukwu pianos agba aja aja na ọcha iji chọọ ụlọ gị mma.
Dị ka mgbe niile mgbe anyị na -ekwu maka ụcha, ịhọrọ nke ziri ezi ga -enyere anyị aka ma a bịa n'ịmepụta otu ụdị n'ime ụlọ. Black pianos dabara na gburugburu ebe ọ bụla, agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ inye ụlọ ahụ ụdị ọgbara ọhụrụ ma nwee ahụ iru ala, piano aja aja ọ nwere ike bụrụ ezigbo enyi gị. Na ebumnuche? White na -ejupụta n'àgwà ma dabara n'ụzọ zuru oke na gburugburu ọgbara ọhụrụ na nka.
Ebe kacha mma
Ime ụlọ ahụ Ọ na -abụkarị ebe a na -etinye nnukwu piano, n'ihi na ọ bụ nnukwu ụlọ n'ime ụlọ. Otu ihe isi ike na -adịkarị mma iji nnukwu piano chọọ ụlọ mma bụkarị enweghị oghere, yabụ na ọ siri ike na ọ bụrụ na anyị ahụghị ebe n'ime ụlọ anyị nwere ike ime ya n'ime ụlọ ọzọ. Mana ọ bụ naanị ya bụ ihe ọzọ? Ọ bụghị n'ezie.
N'akụkụ windo n'ime ime ụlọ
Ọ bụrụ na echiche gị bụ idobe nnukwu piano n'ime ụlọ, chọta ebe maka ya na nso mpio. Yabụ, ị nwere ike irite uru nke ọkụ ọkụ mgbe ịchọrọ ịkpọ piano. Debe akwa a na -ekpo ọkụ n'okpuru piano, oriọna ọgbara ọhụrụ n'elu ya, na ụfọdụ eserese na mgbidi iji mepụta mkpokọta mara mma na nka.
Ị ga -achọkwa ya stool iji kpọọ piano na oche dị mma ma ọ bụ pouf ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịnọdụ ala wee gee gị ntị. Ọ bụrụ na n'ime oghere a ma ọ bụ n'akụkụ ya, ị nwekwara ohere ịgụnye shelf ọrụ, ị nwere ike tinye akwụkwọ gị niile na akara gị.
Na -esote steepụ
N'ụlọ ndị buru ibu nwere steepụ etiti na nnukwu oghere dị n'akụkụ ndị a, ị nwere ike were nke a tinye piano. Ọ bụ nnukwu nhọrọ iji jupụta oghere nke na -abụkarị nke ụlọ ezumezu ma ọ bụ ime ụlọ na nke anaghị adị mfe mgbe niile ịchọ mma.
Ọmarịcha steepụ na mgbidi dị ọcha bụ naanị ihe ịchọrọ iji mee ka piano gị dị mma. Ọ bụ otu echiche iji nnukwu piano chọọ ụlọ gị mma. ọkaibe na naanị, n'ezie. Ọ ga -abụ ihe mbụ ndị ọbịa gị ga -ahụ mgbe ị nabatara ha n'ụlọ.
Na oghere nkeonwe
You nwere a obere ụlọ elu ma ọ bụ ime ụlọ n'ụlọ? Nke a nwere ike bụrụ oghere zuru oke iji nọrọ n'ụlọ nnukwu piano wee megharịa ahụ. Ịchọghị ka ọ buru nnukwu ibu; Naanị ị ga -achọ oghere maka piano, oche ole na ole na nchekwa iji chekwaa akwụkwọ gị na egwu egwu.
Ọ bụrụ na ị nwere ohere iji tọghata ya n'ime ụlọ piano ezigbo ihe bụ ịgbachi ya agbụ. Yabụ ị nwere ike ịmụgharị ka ịchọrọ n'ebughị n'obi 'inye ndị ezinụlọ gị nsogbu ma ọ bụ na -enyeghị gị nsogbu. Ị ga -enwe ike itinye uche na piano. Agbanyeghị na ị ga -achọ karịa mkpuchi mkpuchi ụda iji tinye uche. Ọ na -esikwa ike itinye uche na oghere ma ọ bụrụ oyi na -adịghị anabata.
Debe kapeeti na oghere, ụfọdụ oche oche, odeakwụkwọ nta -Ọ bụrụ na ị dee egwu nke gị- ma lekọta ọkụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnweghị nnukwu ọnụ ụzọ ọkụ ọkụ. Jikọta ọkụ nkịtị na ndị ọzọ nwere mmekọrịta chiri anya nke na -enye gị ohere iru gburugburu dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Ngwongwo » Echiche iji nnukwu piano chọọ ụlọ gị mma